अाफ्नो पार्टनरसँग सेक्स गर्ने नयाँ तरिका थाहा पाइराख्नुहोस् ! – Everest Dainik – News from Nepal
अाफ्नो पार्टनरसँग सेक्स गर्ने नयाँ तरिका थाहा पाइराख्नुहोस् !
प्राय:जसो मानिसहरू सेक्स गर्नका लागी नयाँ नयाँ तरिकाहरू खोजी गरिरहने गरेको पाइन्छ । मानिसहरूको यही कुरालार्इ ध्यानमा राख्दै गूगल ग्लासले एउटा यस्तो ऐप्स बनाएको छ । हजुर, अब सेक्स टेप बनाउने जमाना गएको छ । यस २१ औं शताव्दिमा यसको ठाउँ गूगल ग्लासले लिएको छ । अब तपाइँ आफुले लाइभ सेक्स गरेको हेर्ने मात्र नभै यसको आफैंले रेकर्डिङ समेत गर्न सक्नुहुनेछ ।
डेलीमेल को एक खबरअनुसार, अब त्यो जमाना गएको छ, जब तपाइँ आफ्नो सेक्स गतिविधिहरू वा इन्टीमेट मोमेन्ट्सलाइ रेकर्ड गर्नका लागी क्यामराको मद्दत लिनु पर्दथ्यो । सेक्स विद गूगल ग्लास ऐप को निर्माण नोभेम्बरमा लेबनीज डिजाइन का स्टूडेन्ट शेरिफ मक्तबी ले लण्डन वियरेबल हेकथोन इभेन्टमा गरेका थिए ।
यस ऐपको निर्माणको उद्देश्य बताउँदै मक्तबीले भनेका छन कि उनी चाहन्छन कि मानिसहरू नयाँ तरीकाबाट नयाँ चिजको अनुभव गरून । अर्थात उनीहरू मानिसहरूको अनुभवलाइ बदल्न चाहन्छन । मक्तबीका अनुसार जब हामीले आफैंले आफुलाइ सोध्यौं कि सेक्सलाइ गूगल ग्लासबाट कसरी अझै राम्रो तथा रोमाञ्चक बनाउन सकिन्छ र त्यसपछि हाम्रो दिमागमा एउटा सेक्स विद ग्लास को आइडिया आयो।
यस एपको राम्रो कुरा के भने यसलाइ आवाज मार्फत नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ।
जस्तै, बोल्नुस कि अब रेकडिङका लागी तयार होउ । त्यसपछि यो एप शुरू हुन थाल्दछ । यस ग्लास मार्फत मात्र लाइभ सेक्स रेकर्ड गर्न सकिने नभै फोटो पनि खिच्न सकिन्छ । भन्नुको मतलब यो हो कि यो गूगल ग्लास तपाइँका सबै प्राइभेट र म्याजिक मुमेन्ट्सलाइ सजिलै तश्विरमा कैद गर्न सक्दछ ।
एपको अर्को रमाइलो कुरा के भने पार्टनर संग सेक्स गर्दा पार्टनर को अगाडी कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा पनि देख्न सकिन्छ । यतिमात्र हैन, दुबै पार्टनरका ग्लासेजबाट दुबै साइडबाट रेकर्डिङ हुन सक्दछ । व्यक्ति आफुलाइ सेक्स गर्दा गर्दै पनि हेर्न सक्दछ कि उ कस्तो देखिन्छ ।
डिलीट हुन भन्दा पहिले पांच घण्टा पछि यो भिडियो आफैं प्ले हुन्छ । यस एपलाइ यसको लञ्चिङ गरिएको दिन नै वेबसाइटबाट १७ गूगल ग्लास अनर्सले यसालाइ डाउनलोड गरेका थिए ।
अब तपाइँ पनि छिटै यस ग्लासका साथमा सेक्स गरेर आफ्नो सेक्स एक्सपिरिएन्सलाइ बदल्ने मात्र नभै आफ्ना इन्टीमेट पलहरूलाइ पनि सजिलै कैद पनि गर्न सक्नुहुन्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट